Muraayadda Muraayadda Muraayadda
Muraayadaha Caara -Cadka
Post ahama Steel
Qalabyada Korantada Korontada
Qalabyada Furimaha Furimaha Hilibka
Qaybaha Makiinadaha Kale
Pump Madax Qaybo
Habka Hagaajinta ee Ciidda Daadinta ee Shell Shell of Casting Precision
Iyada oo loo marayo kulanka hagaajinta tayada toddobaadlaha ah ee Arbacada, soo saaraha saxda ah ee soo saarta biraha Shengyu wuxuu sii wadaa inuu fiiro gaar ah u yeesho xaaladda tayada. Shirkadu had iyo jeer waxay u hoggaansantaa falsafadda ganacsiga ee tayada marka hore. Dhawaan, xogta tayada ayaa ka tarjumaysa kororka saamiga ...
Xakamaynta Heerkulka Caaryada ayaa fure u ah in si guul leh loo tuuro shubka biraha
Dhab ahaantii, waxaan ka heli karnaa hooska biraha birta aan lahayn ee qalabka warshadaha badan, oo mararka qaarkood saameeya qaar ka mid ah codsiyada caadiga ah ee qalabka warshadaha. Haddii lagu barto habka wax soo saarka, waa inaan xoojinnaa xakameynta heerkulka caaryada, maxaa yeelay heerkulka caaryada ayaa ...
Habka Diyaarinta Dahaarka ee Raadinta Sax
Xuduudaha physicochemical of silica sol waxaa inta badan go'aamiya macdanta: SiO2 content, cufnaanta, Na2O content, qiimaha pH, dheef -shiid kiimikaad, dhexroorka walxaha colloidal, iwm. ..
Waa maxay Rinjiga Sax Vacuum?
Tuuritaanka saxda ah ee faaruqintu waa hannaan loo shubay oo biraha lagu dhalaaliyey, lagu shubay laguna qallajiyey qol faaruq ah. Waxay yareyn kartaa gaaska ku jira biraha waxayna ka hortagi kartaa oksaydhka birta iyo trachoma. Habkani wuxuu soo saari karaa shubasho aad u baahan. Qiimaha shubista faaruqi waa mid sare, waana ...
Adeegyada Tuurista Maalgelinta.
Dongying Shengyu Birta Product Co.Ltd waa hal-stop-dukaan si loogu adeego adeegsiga noocooda tuurista biraha ee kala duwan ee qalabka sida naxaas, zinc, aluminium, magnesium in la abuuray by habka wax taaj oo kala duwan. Tan iyo wakhti aad u dheer, xalka shubista maal -galintayadu waxay ka faa'iideysanaysay dadka ...
Maxay Yihiin Sifooyinka Farsamaynta Kaydka Maalgashiga?
Wax -soo -saarka saxda ah ee tuurista maalgashiga ayaa leh faa'iidooyin badan, laakiin sidoo kale waxay leedahay faa'iido darrooyinka habab badan, geeddi -socod adag, wareegga wax -soo -saarka dheer, iyo arrimo badan oo saameeya tayada kabka, taas oo xaddideysa dalabka iyo kobcinta kabka saxda ah ee qaar gaar ah ...
Aagga Dhaqaalaha LongJu, Magaalada Dongying, Gobolka Shandong, Shiinaha.
subscribe dheh Su'aasheena
Su'aalaha ku saabsan alaabta ama pricelist our, fadlan nala soo xiriir oo waxaan la xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood.